FAQ - SYM Electronics Co., Ltd.
amahanisi ukushisa namakhaza
Crimp wire amahanisi
Flat Iribhoni Cable
Fuse Umnikazi amahanisi
Shintsha Wire amahanisi
Abanye bakha imizila edingekayo yokwenza Harness
Female pin unhlokweni
-PH 2.0 uchungechunge
Ama-FAQ we Abakhiqizi
Uma unemibuzo, sinalo izimpendulo. Kusukela yokukhiqiza ukuze ukumaketha nokusebenza ngempumelelo.
Ingabe unikele amasampula ukuhlolwa?
Ngemva kokuqinisekisa intengo, ungacela i-amasampula ukuhlola izinga yethu.
Uma udinga amasampula, singakwazi ukukuthumelela amasampula ngu khulula (kuncike izinhlobo kanye qty amasampuli) noma ungakwazi ukukhokhela isampula izindleko.
Ngingaphila isikhathi esingakanani ulindele ukuthola isampula?
Ngemva ukhokhela icala isampula thina uqinisekise umdwebo nomunye, amasampula uzolunga izinsuku 1-5.
Sample oda zithunyelwa nge-UPS / DHL / FedEx, okuzothatha izinsuku umsebenzi 4-5 ukuthunyelwa. Ungasebenzisa ama-akhawunti akho siqu courier noma lokuqala ngokukhokha iba nathi uma ungenayo i-akhawunti.
Ningakwazi yini ukwenza i-OEM / ODM kithi?
Yebo. Singabantu ngemfudumalo bamukelekile OEM kanye ODM Ama-oda, Singabantu umkhiqizi okhokhelwayo wire amahanisi, ikhebula inhlangano nezixhumi PCB, ifektri ne eminyakeni engaphezu kuka-12-OEM noma ODM isipiliyoni.
Kuthiwani ngesikhathi owayephambili ekukhiqizweni?
Uma sikhuluma iqiniso, incike ubukhulu oda kanye isizini wena ubeka umyalelo. Isikhathi ukuhola MOQ imayelana 5 izinsuku ezingu-15. Ngokuvamile, zonke izimpahla kungenziwa eseqedile emasontweni 4.
Singabantu ukwamukela EXW, Fob, VGA, njll Ungakhetha eyodwa okuyinto elula kunazo noma iningi engabizi ngawe .
Ingabe unayo yesiqinisekiso?
Yebo, sinikeza omunye yesiqinisekiso ngonyaka.
Yini umahluko phakathi nomhlangano ikhebuli amahanisi wire?
Wire: A umqhubi olulodwa (ngokuvamile ezazenziwe ngethusi noma se-aluminium). Izintambo kukhona ukumelana ongaphakeme, eziphansi, futhi kukalwa "gauge". I ezincane lesikali, lo mkhulu wire. I mkhulu bentambo, ayanda ingozi, ngokulimala okudalwa izinto fuse ashiswe.
Ikhebula: babashayeli ababili noma ngaphezulu zihambisana ibhantshi olulodwa. Amakhebuli Iningi kuqukathe wire omuhle ethwele zamanje kagesi, i-wire kokungathathi hlangothi ukuthi uqeda iluphu kagesi kanye wire isisekelo.
Indlela ngokwezifiso wire amahanisi noma ikhebula inhlangano?
ifektri Ithimba lethu uzakulumathisa nethimba amakhasimende 'ndawonye, ​​uma ikhasimende angakunikeza izithombe langempela kanye nemidwebo ahlobene inkomba okuzoba kakhulu eziwusizo ngokwezifiso.
Kunjani iziqondiso compliancy?
Iningi izinto zethu eluhlaza ngokuvamile zomkhalazi lready nemithetho zamanje, okusho ukuthi bayakwazi ukunciphisa iziqondiso compliancy yakho izingozi (ISO 9001, ISO 14001, ZAMA ... njll)
Ingabe privde izithako / izinto zokusetshenziswa ukuze ufane noma ingabe ngiyazithungatha lezi?
Lokhu kuncike siqu nezidingo zakho. Ezinye izinkampani ufisa outsource inqubo ephelele esikhiqiza amakhemikhali, kuhlanganise ukuthengwa izithako / izinto zokusetshenziswa, abanye bakhethe ukuletha izithako ngokwabo. Inkampani okhokhelwayo ezinhle usebenzisa indlela yalo ukusebenza izidingo zebhizinisi lakho.
Floor 2, ukwakha 5, changxing zobuchwepheshe epaki zezimboni, isigodi shayi, shajing edolobheni, baoan wesifunda, shenzhen idolobha, isifundazwe Guangdong